Fahatsiarovana An’ilay Teratany Amerikana, Lehman Brightman, Mpisava Lalana Mikasika Ireo Zon’ny Sivily · Global Voices teny Malagasy
Fahatsiarovana An'ilay Teratany Amerikana, Lehman Brightman, Mpisava Lalana Mikasika Ireo Zon'ny Sivily
Voadika ny 23 Aogositra 2017 5:19 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Italiano, Français, عربي, Español, English
Pikantsarin'i Lehman Brightman tao anatin'ny lahatsarin-kira iray tamin'ny taona 1970, tao amin'ny Anjerimanontolon'i Oregon. (YouTube)
Maty tamin'ny Alahady 18 jona 2017 teo, tao Walnut Creek ao Kalifornia ilay mahery fo sy mpisava lalana amin'ny zo sivilin'ireo Teratany Amerikana, namarana ny fiainana tamin'ny fikomiana sy tolona ho amin'ny fampahalalana ny tantara iray very.
Teraka tamin'ny taona 1930 tao Cheyenne River Sioux Reservation i Lehman Brightman, teratany Amerikana Sioux sy Creek no fiaviany. Mpitarika tolona i Brightman sady mpikarakara ny zon'ireo Teratany Amerikana nandritra ny taona 1960 sy 1970, ary nampianatra ny taranja sosiolojia sy tantara tao San Francisco Bay Area.
Ny fahalasanany, ary koa ny fiainany sy ny lova navelany, dia nahazo rakotra kely teo amin'ireo fampahalalam-baovao mahazatra – izay maneho amin'ny fomba maro ny tena marina mikasika ny tolona ataon'ny Teratany Amerikana ho amin'ny fanekena azy sy ny rariny ao Etazonia. Saingy na dia matetika aza no navahana teny amin'ny faran'ny pejy na tany ambadiky ny pejy ireny zavatra ireny, ny fiainan'i Brightman sy ny tantaran'ny hetsika mikasika ireo zo sivily an'ireo Teratany Amerikana dia miasa ho toy ny vavolombelon'ny hery sy tanjaka amin'io fikatsahana amim-pirehetampo ny rariny io.
Matetika i Brightman no mampiasa fehezanteny hoe, “Herin'ny Indiana”, ary nino fa voamarina ny feon'ny mpitolona iray, avy amin'ny tantara lavan'ny vonomoka sy ny fanamparam-pahefana natao tamin'ireo Teratany Amerikana teo ampelatanan'ny governemantan'i Etazonia. Ny fomba fiteny mivaivay nataon'i Brightman sy ny fihetsika tsy mila fanagadràna dia samy hita taratra teo amin'ny kabariny tsara lahatra sy ireo asa nataony, izay azo nandikana ny tanjaky ny fahaizana mitarika sy ny fahamendrehana ho an'ireo teratany Amerikana mitovy tamin'izay nampiasain'i Malcolm X.
Tsy zavatra iray nataon'i Brightman velively ny fahitsiana ara-politika. Tamin'ny resaka nataony tamin'ny vahoaka tamin'ny taona 1969, nanambara i Brightman fa “Miantso ny tenanay hoe teratany Amerikana izahay satria nomen'ny dondrona adala iray ny anarana hoe indiana izay nihevitra ny tenany ho tany India.” Saingy izay ny asany.
Tamin'ny fotoanan'ny fahavaratra tamin'ny taona 1968, namorona ny fikambanan'ireo Teratany Amerikana Mitambatra (UNA) tao San Francisco Bay Area i Brightman. Nolazain‘i Brightman fa noforoniny ny UNA “mba hananganana fotsiny helo kely iray. Ary dia nahatsangana helo tena helo tokoa aho”.
Ny 20 novambra 1969, tafiditra tao anatin'ny raharaha fakàna ny Nosy Alcatraz i Brightman, fanombohana fibodoana an'ohatra iray nandritry ny 19-volana hitakiana ireo zo mikasika ny fananantany ho an'ny Teratany Amerikana ary handrindrana mandatehezana tokana hanaovana hetsika iray vaovao. Ilay fibodoan dia teraka tao anaty fahatsapana ny filàna maika nitombo hatrany teny anivon'ireo teratany Amerikana hoe ny asa hatrany amin'ny fototra no valin'ireo taona maro tsy niraharahiana sy ny famoretana nataon'ny governemanta federaly. Vao haingana, ny volana aogositra 1970, nitarika vondrona iray misy an'ireo mpikatroka mahery fo i Brightman tamin'ny fibodoana ny Mount Rushmore .
Ity lahatsary tamin'ny taona 1970 ity dia mandrakotra ny fijoroana maha-mpitolona an'i Brightman sy ireo vondrona niaraka taminy. Ahitana ny fahavitrihana sy ny fanantenana nandritra ilay vanimpotoana ny ampahany amin'ireo asany, ary mifanohitra tanteraka amin'ny fitantarana mampiahiahy omen'ny fampahalalam-baovao.
Tamin'ny taona 1976, nanao bemidina tao an-tranon'i Brightman ny FBI taorian'ny nanafenany an'i Dennis Banks, ilay mpikatroka mahery fo tamin'ny Fihetsiketsehana Amerikana Indiana, izay mpiery iray tamin'izany fotoana izany. Nahazo ny fifantohan-tsain'ny firenena manontolo ilay tranga ary i Brightman nilaza ny tsy nanenenany na kely aza ireo asany, matetika naveriny notantaraina tamin'ireo mpianany ny tantara tamin'ny maha-mpampianatra azy.
Lohateny vaventin'ny “San Francisco Examiner” manasongadina an'i Brightman tamin'ny 1976
Mba anisany nanambitana sahala amin'ireo hafa ihany aho, teny amin'ny anjerimanontolo, nanaraka ny fampianarana nomen'i Brightman. Matetika ny resany no nolokoiny tamin'ireo fahatsiarovany, azy manokana, mikasika ny tantaran'i Etazonia : ny andraikiny nandritra ny adin'i Korea, ny fikarakarana tamin'ireo taona 60, ary niresaka ampahatsorana ny fitondranten'ireo tompon'andraikitra federaly.
Ireo fisehoan-javatra vao haingana tao amin'i Standing Rock dia toy ny fampahatsiahivana fa mbola mijanona ho olana tsy foana ao Etazonia ny tsy rariny atao amin'ireo vahoaka teratany. Ny fandàvan'i Lehman Brightman tsy hanaiky ny fanambatambazana, ary koa ny fikatsahana ny fahamendrehana nandritra ny fotoanany tamin'ny alàlan'ny asa mivantana sy ny fanovàna tamin'ny alàlan'ny fifanandrinana, dia manome lesona ho an'ny ankehitriny sy ny hoavy, indrindra fa ho an'ireo olona hafa fihodirana sy ireo vahoakan'ny Tontolo Fahatelo (Third World).
Io tatitra fohy io dia tsy hamerina araka ny tokony ho izy ny rariny ho an'i Lehman Brightman na ny lovany goavana navelany. Mino aho anefa fa handrisika ireo izay tsy nahalala azy io mba haka aingam-panahy avy amin'ny asany sy ny tantara mampitolagaga mikasika ny mahery fofikatrohana sy ny fanoherana avy amin'ireo Teratany Amerikana ao Etazonia.